Headline Nepal | ओलीका लागि अरु 'बुढो बाजे' वकिल, आफू चाहीँ 'बिरामी बुढो' नेता किन नहुने ?
ओलीका लागि अरु 'बुढो बाजे' वकिल, आफू चाहीँ 'बिरामी बुढो' नेता किन नहुने ?
१० माघ,काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो बोलीका कारण पनि चर्चामा आउने नेतामा पर्छन । कहिले काहीँ उनले बोलेको कुराको चर्को विरोध पनि हुने गरेको छ । ओली आफू विरोधीविरुद्व गाली, बेइज्जतमा उत्रन पनि पछि पर्दैनन् ।
ओलीका सहकर्मी, विपक्षी सायद कमै होलान् जसलाई ओलीले भाषणमा नउडाएका हुन् । गाली र बेइज्जतमा उत्रेपछि ओलीले कहिले त के बोल्दैछु भन्ने पनि बिर्सन्छन् । आफ्नो पद र ओहोदा नै बिर्सन्छन् । यस्तै भयो शुक्रबारको ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता भेलामा ।
बुधबार संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई पनि ओलीले छाडेनन् । ओलीले ९५ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई बाजे वकिल भन्न सम्म भ्याए । भाषणका क्रममा ओलीले व्यंग्य गर्दै भने अदालतमा एक जना बाजे वकिललाई अदालतमा तमासा देखाउन लगेछन् । ओलीका भाषण सुनेर हामी पनि पेट मिचिमिचि हाँस्छौ । रमाइलो लाग्छ हामीलाई ।
प्रधानमन्त्री ओलीनै हुन् जो नेपाली सञ्चार माध्यमले तिमी भन्यो भनेर बारम्बार इज्जत चाहियो भन्दै सञ्चारमाध्यममाथि नै खनिन्छन । अनि ओलीले बोलेको यो बोली चाहीँ सुहायो त ? जसले आफ्नो सारा जीवन अदालतमा अरुलाई न्याय दिलाएर बित्यो उनी आज ९५ वर्षमा पनि उसैगरि खटिरहेका छन् । उनी चाहीँ ओलीको व्यंग्यको पात्र बन्नुपर्ने ? ओलीले चाँही कसैलाई सम्मान गर्नुपर्दैन ? ओली संसारमै सबैभन्दा ठूला हुन ? नेपाली सञ्चारमाध्यमले कुनै दिन आफ्नो बाबुआमालाई पनि तँ भन्छन् भनेर कटाक्ष गर्ने ओलीले खै त सम्मान देखाउन सकेको ? ओलीले भाषण कै क्रममा बाजे वकिलसँगै अदालतलाई तमाशा देखाउने ठाउँको रुपमा पनि चित्रण गरेका छन् ।
अदालत ओलीका लागि कहिलेबाट तमाशा देखाउने ठाउँ भयो ? आम मानिसले त अदालतलाई न्याय पाउने घरको रुपमा पो पुज्छन । न्यायका लागि आश बोकेर धाइरहन्छन् । अदालतको बहसलाई तमासा भन्नु घोर आपत्तिजनक मात्र होइन अदालतको अवहेलना हो । यहि देशलाई न्याय दिलाउनका लागि लौरो टेकेरै भएपनि बहस गर्न पुगेको न्याय पुजारी हुन वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी ओलीका कुनै मजाकका पात्र पक्कै होइनन् ।
अब ओलीको कुरा गरौँ । ६९ वर्षे ओली पनि बाजे भएनन् र ? ओली कै बोलीमा भन्दा बुढेसकालमा त्यो पनि दुई दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति घरमा आराम गरेर किन नबसेको ? ओलीले अरुलाई बुढो बाजे भनेर व्यंग्य गरिरहँदा अरुले ओलीलाई बुढो, बिरामी भन्न पाउछन् होला नि ? अरुबाट सम्मान खोज्नेले आफूले पनि सम्मान गर्न जान्नुपर्छ होला नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ?
अहिलेको राजनीतिक परिवेशलाई पनि यही विषयसँग जोडेर हेरौँ । प्रधानमन्त्री ओलीमा आफू अल्पमतमा परेको र अविश्वासको प्रस्ताव आउने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका लागि संसद नै विघटन गरे । अरुको उमेर र स्वास्थ्यको ख्याल गरेर व्यंग्य गर्ने ओलीले आफ्नो पनि ख्याल गरेको भए पक्कै पनि अहिलको स्थिती आउने थिएन ।
पार्टीभित्रै ओलीप्रति अविश्वास उत्पन्न भएपछि राजीनामा दिएको भए त झनै एक सच्चा राजनीतिज्ञको आभास गर्थे नेपाली जनताले । राजनीतिक अनुशासनमा ओलीले वाहीवाही पनि पाउँदे उमेरको ख्याल गरेको भए।